Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Liiska Buugaagta Dhiirrigelinta Sare si ay kaaga caawiyaan Kobcinta
18 min akhris
Buugaagtu waxay ka kooban yihiin xikmad xoog badan, oo wax ka beddeli karta oo beddeli karta dariiqa noloshaada oo dhan. Tani waxay u socotaa caafimaadka, maalka, xiriirka, iyo wax kasta oo kale oo ugu muhimsan.
Si aad maalin walba u sii kobocdo oo u kobcdo, kaliya akhri 20 bog oo buug weyn ah! ROI waa mid aad u weyn.
Waa kuwan qaar ka mid ah buugaag dhiirrigelin leh oo kaa caawiya inaad koraan.
Sidoo kale, waxaa jira talooyin si aad uga hesho qiimaha ugu badan bog kasta oo aad rogto.
Xitaa ganacsatada ugu han -weyn ayaa og: dhiirrigelintu waa mid waqti -gaaban ah, oo waligaa uma muuqan kartid inaad ku dhiirrigeliso waqtiga ku habboon. Markaad akhrido bog ama laba buug oo dhiirigelin leh, waxaad helaysaa xiisaha aad u baahan tahay inaad bilowdo.
"7 -caadadood ee dadka wax -ku -oolka ah by Stephen R. Covey waa buug weyn oo kaa caawinaya inaad dareento wax -soo -saar badan iyo dhiirigelin, ”ayuu yiri Mary Berry, Aasaasaha iyo Maamulaha of Cosmos Vita. "Waxay ku dartaa qalab si loo helo natiijooyinka la doonayo iyadoo la adkeynayo muhiimadda ay leedahay in la daryeelo waxa soo saara natiijooyinka la yiri. Intaas waxaa sii dheer, waxay taabanaysaa waxyaabaha madax-bannaanida iyo is-xukunka, isku-tiirsanaanta iyo la shaqaynta dadka kale, iyo horumar joogto ah. Buugani wuxuu kaa caawin doonaa inaad fahanto dhammaan dhinacyada qiimaha leh ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso intaad gaartid yoolalkaaga. ”
Dhiirigelinta, edbinta, caadooyinka wanaagsan - maxaad kaloo u baahan tahay inaad ku guulaysato?
Khibrad u yeelo macallinka ugu weyn nolosha, laakiin buug weyn ayaa kaa caawin kara inaad si qoto dheer wax u fahanto oo aad horumar muhiim ah u gaarto waqtiyada muhiimka ah.
"Aasaasiga: Raadinta Aadaabta leh ee Guusha laga bilaabo Greg McKeown wuxuu wax walba hoos ugu dhigayaa waxyaabaha daruuriga ah, ”ayuu yiri Jared Pobre, Maamulaha Guud iyo Aasaasaha of Caldera + Lab. “Marka ay timaado maareynta waqtiga, maahan in wax walba hoos loo dhigo. Waxay ku saabsan tahay in waxyaalaha saxda ah la qabto. Ahaanshaha xulasho badan oo ku saabsan halka aan ku bixino tamarteena waxay noo suuro gelineysaa inaan diirada saarno waxa run ahaantii muhiimka ah. ”
Wax ku baro nolosha dhabta ah, laakiin sidoo kale ku dhaqan casharrada buugaagta si aad ugu badiso guusha.
Markaad akhrido buug, waxaad ku dhejisaa maskaxda iyo malaynta qaar ka mid ah mufakiriinta ugu waaweyn adduunka. Yaa suurtogal ah inuu u gudbiyo fursaddan oo kale, qiimo aad u badan?
"Jonathan Franzen waa mid ka mid ah qorayaasha weyn ee nool," ayuu yiri Jorgen Vig Knudstorp, Gudoomiyaha fulinta of Kooxda LEGO Brand. "Buugiisii ​​ugu dambeeyay waa aruurinta sheekooyin aan caadi ahayn, oo ay ka mid yihiin waxyaabo kale, oo ku doodaya akhriska iyo qorista maqaallada, taas oo aad uga duwan farriimaha deg -degga ah, farriimaha warbaahinta bulshada, iyo cinwaannada wararka kooban."
Franzen waa mid ka mid ah kuwa badan! Soo qaado qoraa aad jeceshahay oo jeex jeex jeexitaankooda oo dhan si aad runtii u hesho sawirka buuxa.
Intee in le'eg ayaan si dhab ah u falanqeynaa ficilladeena iyo dabeecadahayaga? Buugaagta qaarkood waxay nooga baahan yihiin inaan si dheer u eegno caadooyinkayaga oo aan hagaajinno haddii loo baahdo.
“Mid ka mid ah buugaagta dhiirrigelinta badan ee aan akhriyay ayaa ah Awoodda Caadada, Sababta aan u Sameyno Waxa aan ka sameyno Nolosha iyo Ganacsiga, waxaa qoray Charles Duhigg, ”ayuu yiri Ashley Laffin, Agaasimaha Sare ee Maareynta Summada at Wasakh Hooyo. “Waa buug weyn oo runtii kaa dhigi kara inaad dareento wax -soo -saar badan oo aad ku firfircoonayso shaqadaada. Buuggani wuxuu daboolayaa jihooyin kala duwan, laga bilaabo isboortiga ilaa meheradaha waaweyn ee DTC illaa dhaqdhaqaaqyada wuxuuna fiiriyaa xiisaha sayniska ka dambeeya caadooyinka. Waxay ku dhexjirtaa sababta bini -aadamku caadada u yihiin waxayna sidoo kale sharxaysaa sida caadooyinka loo jabin karo ama loo beddeli karo. ”
Maalin kasta oo aan noolnahay waxay ka kooban tahay caadooyin, caafimaad leh ama si kale - buuggan si dhab ah u qaado!
Had iyo jeer ma jiri doonto jawaab celin wanaagsan oo fara badan marka la bilaabayo meherad ama hadaf laga leeyahay nolosha, gaar ahaan marxaladaha hore. Soo hel buug kugu dhiirrigeliya oo ku siiya maskaxda loo baahan yahay si aad u guulaysato.
“Waan ka helay akhriska Qaado Qabasho by Gino Wickman iyo Mike Paton, ”ayuu yiri Kiran Gollakota, Aasaasaha of Waltham Clinic. “Waxay quseysaa sida loo go'aamiyo hoggaamiye ahaan iyo ganacsade ahaan marka ay adkaato in la arko iftiinka dhammaadka tunnel -ka. Waxay i baratay sida loo xirxiro oo horay loogu sii socdo xitaa markii la dareemay inaysan macno lahayn. ”
Dhammaanteen ma nihin kuwo ku dhiirrigeliya isla hab -qoraalka iyo mawduuca, markaa raadso buug kuu iftiiminaya adiga.
Waxaa jira kumanaan buugaag ah oo ku jira nooca is-caawinta, kuwaas oo badankood isku mar ku celceliya isla dhulka. Soo hel dheemanka meel adag oo ku hay khaanaddaada, maxaa yeelay aad bay u xoog badan yihiin.
“Buugaagta is-caawintu waxay noqdeen suuq caynkan oo kale ah, waxay ku dhow yihiin hal dime oo darsin ah, laakiin, baddii dib-u-warshadaynta iyo dib-u-kobcinta waxa ku jira ganacsadaha, waxaan ku guulaystay inaan ka helo xikmad iyo hagid aad u badan Jamie Schmidt Supermaker, "Ayuu yiri Nik Sharma, Maamulaha Guud of Sharma Brands. "Schmidt wuxuu bixiyaa bangiga aqoonta weyn ee hagitaanka kobaca ganacsiga, sumadaynta, horumarka, noocyada kala duwan ee qaababka suuqgeynta, kor u qaadista, ka -qaybgalka macaamiisha iyo PR. Waxay ahayd buugga is-caawinta dukaanka hal-dukaan oo aan awooday inaan si fudud ugu dabaqo qorshahayga ganacsi kaas oo ku dhammaaday inuu naga caawiyo inaan kor u qaadno si ka dhakhso badan sidii aan filaynay. ”
Ha iloobin inaad adeegsato waxaad ka baratay buugaagta is-caawinta, haddii kale, waa uun akhrinta xeebta.
Fahamka Farsamada Cusub
Maxaad u malaynaysaa in Agaasimayaasha guud iyo hoggaamiyeyaasha warshaduhu had iyo jeer akhriyaan buugaag cusub? Taasi waa sida ay wax uga bartaan isbeddellada cusub, teknolojiyadda soo ifbaxa, iyo waxyaabo kale oo iyaga siiya darajada ganacsiga.
“Waan helay Dhismayaasha Waxgaradka aad u xiiso badan iyo sharraxaad wanaagsan oo ku saabsan AI - oo muhiim u ah adduun dhaqso u socda oo wax ka qabanaya su'aalaha anshaxa ee aaggan, ”ayuu yidhi Andrew Penn, Maamulaha Guud iyo Agaasimaha Guud at Telstra.
Ma aha oo kaliya mawduucyadan xiisaha leh, laakiin waxay kaa caawin doonaan inaad sidoo kale ku guulaysato ganacsiga.
Fahamka Cilmi -nafsiga
Maskaxda aadanaha ayaa laga yaabaa inay tahay mawduuca ugu xiisaha badan dhammaan, waxaana jira siyaabo aan tiro lahayn oo lagu dabaqi karo natiijooyinka caafimaad ee ciyaarta ganacsiga. Akhri maskaxda si aad si fiican u fahamto naftaada iyo dadka kale.
"Cilmi -nafsiga Carol Dweck wuxuu caqabad ku yahay muhiimada ay leedahay in la yeesho maskaxda koritaanka buuggeeda, Maskax: Cilmu -nafsiga Guusha, "Ayuu yiri Dr. Robert Applebaum, Milkiilaha of Applebaum MD. “Waxay soo jeedinaysaa inta aan sii wadno inaan sii wadno horumarka. Gudaha Sixirka Fikirka Weyn, David J. Schwartz ayaa qaba in inta aan nafteena rumaysan nahay, aan ka guuleysan karno hadaf kasta oo la malayn karo. Labadaba buugaagtu waxay ku milmaan awoodda maskaxda iyo xaddiga xakamaynta aan runtii ka haysanno natiijooyinka nolosheenna. ”
Adiga oo leh feker fiiqan iyo maskax xoog badan, sidee ku waayi kartaa?
Ganacsato badan ayaa safarkooda ku bilaaba ujeedo adag, laakiin waxay noqon kartaa mid dawakhsan waqti ka dib cadaadis, daal, iyo is-shaki. Akhri buugaag kaa caawiya dib u ogaanshaha ujeeddadaas oo ku dheji qorshaha ciyaarta.
“Gudaha Simon Sinek Kubilaab Sababta: Sidee Hogaamiyaasha Waaweyn Ugu Dhiirrigeliyaan Qof Walba Inuu Wax Qabto, ogaanshaha ujeeddadaadu waa waxa ganacsigaaga ku haya waddada loo maro dhammaystirka illaa ugu dambayntii aad samayso, ”ayuu yidhi Rym Selmi, Aasaasaha of MiiRO. “Adiga oo aan lahayn 'sababta', ganacsigaagu wuxuu lumin doonaa sababta uu u jiro, macaamiishu mar dambe ma lahaan doonaan sabab ay wax kaaga iibsadaan. Cilmi -nafsiga Angela Duckworth ayaa ku doodaysa buuggeeda, Grit: Awoodda Dareenka iyo Joogtaynta, in joogtaynta joogtada ah ee muddada-dheer ay ugu dambayn kugu dambayn doonto inaad gaarto yoolalkaaga. Buugaagtani waxay bixiyaan aragti weyn oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay in diiradda la saaro ujeeddadaada. ”
Ma jiro buug si toos ah kuugu sheegi doona ujeeddadaada, dabcan. Taasi waa adiga!
Classics -ka Ganacsiga
Uma baahnid inaad noqoto ganacsade si aad uga hesho qiimayaasha qadiimiga ah. Mawduucyada sida maalka iyo maareynta xiriirka waa kuwo caalami ah, markaa bilow inaad akhrido qaar ka mid ah kuwa ugu cadcad dugsiga hore.
“Waxaa jira buugag badan oo i dhiirrigeliyay sannadihii oo dhan, way adag tahay in magacyo kooban la bixiyo,” ayuu yiri Aidan Cole, Aasaasaha of TatBrow. “Milkiile ganacsi ahaan, Rich Dad Aan Dhibaato waxaa qoray Robert Kiyosaki wuxuu ahaa akhris weyn. Buuggu wuxuu ka hadlayaa farqiga u dhexeeya deymaha iyo hantida, dabcan waxaad rabtaa hanti ka badan deymaha. Sidoo kale, waxay ka hadlaysaa farqiga u dhexeeya noqoshada shaqaale, iskaa u shaqeysta, milkiilaha ganacsiga iyo maalgashade. Buug kale oo weyn ayaa ah Sida loo guuleysto asxaabta iyo saameynta dadka waxaa qoray Dale Carnegie. Kani waa buug weyn oo nolosha ah, wuxuu ku barayaa waxyaabo sida sida dadka loo daneeyo si aad u yeelato cilaaqaad waarta! ”
Kuwani waa noocyada buugaagta oo kaliya sii siiya oo u qalma akhrinta badan. Marna ha u oggolaan inay ka baxaan shelf -kaaga.
Koboca iyo Grit
Buugaagtu waxay qabtaan shaqo aad u weyn oo ay ku sharraxayaan fikradaha murugsan, laakiin waxay sidoo kale bixiyaan aragtiyo iftiiminaya fikradaha fudud ee natiijooyinka waaweyn. Taasi waa sixirka erayada.
"Sida laga soo xigtay khabiirka cilmu -nafsiga Angela Duckworth, furaha guusha wuxuu ku tiirsan yahay murugo," ayay tiri Carrie Derocher, CMO of TextSanity. “Buugeeda, Grit: Awoodda Dareenka iyo Joogtaynta, ayaa ku doodaya in intaad joogtaynayso muddo dheer, ugu dambayntii aad gaarto yoolalkaaga. Buuggeeda dhiirigelinta, Maskax: Cilmu -nafsiga Guusha.
Waxaad ka heli kartaa macne, dhiirigelin, iyo waxyaabo kaloo badan buugaag waaweyn. Maxaad sugaysaa?
Talooyinka Shaqada Fog
Buugaagta qaarkood waxay u akhriyaan wax ka badan sida buuga tilmaamaha ama naqshadaha si loo gaaro natiijo go'an. Tani waxay noqon kartaa isbeddel xawaare leh oo aad ka hesho waxaad jeceshahay inaad akhrido wakhtiga firaaqadaada, laakiin natiijadu waxay noqon kartaa mid aad u fiican.
“Hadda la sii daayay Luqadda Jidhka Dijital ah: Sida Loo Dhiso Kalsooni iyo Iskuxirid, Muhiim ma aha Fogaanshaha by Erica Dhawan wuxuu sahamiyaa luqadda jirka ee adduunka dhijitaalka ah, ”ayay tiri Tyler Forte, Aasaasaha iyo Maamulaha guud of Guryaha Felix. “Hadda oo xafiisyo badan ay u guureen jawi isku -dhafan, isgaarsiinta wax -ku -oolka ahi weligeed ma noqon mid ka sii muhiimsan. Iyo kororka kulamada dalwaddii, barashada tarjumidda dabeecadda jirka ayaa kaa caawin doonta inaad si wanaagsan ula shaqeyso oo aad u dhiirrigeliso shaqaalahaaga. ”
Had iyo jeer waxaa jira qiimo barashada xirfado cusub, buugaaguna waxay dardargelin karaan habkan toban laab.
Haddii aad dareemeyso inaad ku dhegan tahay dhex -dhexaad ama aad u baahan tahay inaad bilowdo bood bood nolosha, waa waqtigii la jebin lahaa buug dhiirrigelin leh. Kaliya waxay qaadataa dhowr bog ka hor intaadan helin aragti muhiima oo laga yaabee xitaa inaad yeelato muujinta yar ama laba.
"Maskaxda Kobaca Waxaa qoray Joshua Moore iyo Helen Glasgow waxay galayaan sidii loo sii wadi lahaa raadinta koritaanka, ”ayuu yiri Eric Gist, Aasaasaha of OS cajiib ah. “Mar walba waxaa jira meel koritaan, mana joojinno koritaanka. Waxay i tustay sida loo raadsado fursado cusub oo aan u sii wato barashada xirfadayda. ”
Mararka qaarkood, ereyada saxda ahi waxay kaa caawin karaan inaad ka baxdo hoos u dhaca oo aad heer sare gaadho isla waqtiga ku habboon.
Sheekooyin Dhiirigalin ah
Ma jiraan wax dhiirigelin leh oo ka badan akhrinta dadka dhabta ah iyo dhacdooyinkooda hal -abuurka leh ee hal -abuurka iyo guusha. Kaliya maahan wax xiiso leh, laakiin waxay muujineysaa inaad sidoo kale sameyn karto.
"Aaladaha Titans: Xeeladaha, Jadwalka iyo Caadooyinka Bilyaneerka, Astaamaha, iyo Waxqabadyada Heerka Adduunka waa ururinta dhiirrigelinta sheekooyinka laga soo qaatay ganacsadaha caanka ah Tim Ferriss, ”ayuu yidhi Joshua Tatum, Aasaasaha of Dhaqamada Canvas. “Sheekooyinkani waxay muujinayaan wanaagga, xumaanta, iyo foolxumada nolosha bilyaneerayaasha, astaamaha, iyo halyeeyada, iyagoo siinaya khariidad dhab ah oo ah waddada guusha. Ku -mashquulinta iyo dhiirrigelinta, waxaad rabi doontaa inaad la wadaagto sheekooyinkaas kooxda oo dhan. ”
Baro sida ay u sameeyeen, raac raadkooda, oo ka tag calaamaddaada adduunka.
Guul In kasta oo aan la hubin
Hadal dhab ah-dhammaanteen waxaan is-qabnaa shaki marmar ah. Waqtiyada adag, waxaan ka faa'iideysan karnaa buugaag inaga dhigta kuwo sal leh oo buuxiya kalsoonidayada. Taasi way ka fiican tahay inaad ku dhegto wararka fiilada!
“Barashada sida loo garto oo looga faa'iidaysto fursadaha inta lagu jiro xilliyada fowdada ayaa ahmiyadda la siinayaa Abuur Mustaqbalka + Buug -gacmeedka Hal -abuurka: Xeeladaha Fikirka Carqaladaynaya by Jeremy Gutsche, ”ayuu yiri Shahzil Amin, oo ah Maareeyaha Wada -hawlgalayaasha ee Xarunta Karlani iyo Aasaasaha Emagineer iyo Kahor. “COVID-19 wuxuu beddelay qaabkii aan u ganacsan jirnay. Intii lagu jiray masiibada, shirkado badan ayaa ku guuldaraystay faham la'aan iyo dabacsanaan la'aan. Hase yeeshee qaar kale ayaa ku barwaaqoobay iyaga oo adeegsanaya fikirka carqaladaynaya si ay u aqoonsadaan isbeddelka baahiyaha macmiilka isla markaana si dhakhso leh u kobcaan si ay ula kulmaan. Tani waa lagama maarmaan akhriska masiibada kadib ganacsiyada horay u socda. ”
Ha ku qabsan dhacdooyinka adduunka. Diyaarso akhrinta buugaagta saxda ah iyo qaadashada maanka maskaxda.
Xiriirrada aan la leenahay dadka kale ayaa aad muhiim ugu ah nolol farxad iyo guul leh. Waxaa jira qaar ka mid ah buugaagta caadiga ah oo naga caawiya dhisidda iyo maareynta cilaaqaadka si wax ku ool ah, markaa ha seegin fursadda aad hore ugu akhrin karto.
"Haddii aad rabto in dadku ku jeclaadaan, markaa jooji dhaleeceynta, Dale Carnegie wuxuu ku wacdiyaa buuggiisa sumadda leh, Sida loo guuleysto asxaabta iyo saameynta dadka, "Ayuu yiri Michael Scanlon, CMO iyo Aasaasaha of Maqaarka maqaarka. “Ma jiro farqi weyn oo u dhexeeya xiriirka shaqsiyeed iyo xiriirka ganacsi. Marka ay timaaddo farshaxanka isgaarsiinta, labadooduba waxay adeegsadaan mabaadi ’isku mid ah. Buug kale oo dhiirigelin leh waa David J. Schwartz ', Sixirka Fikirka Weyn, kaas oo bixiya habab wax ku ool ah oo aad naftaada ku tababarato si aad u fikirto oo aad u dhaqanto habka aad ku gaari karto dhammaan rabitaankaaga. ”
Hubaal, waad daawan kartaa fiidyowyo ama waad akhrin kartaa xigashooyinka, laakiin waxba ma garaacayaan waayo -aragnimada buug dhab ah.
Caadooyinka iyo Caadooyinka
Dhammaan waxaan nahay xayawaan caado ah. Su'aashu waxay tahay - caadooyin noocee ah ayaa kaa caawinaya inaad guulaysato, kuweease kaa hortaagan?
"Buugga ugu wanaagsan ee hoggaamiyayaashu akhriyaan waa"7 Habsami u ah dadka aadka u shaqeeya”Ayuu yiri Jason Wong, maamulaha guud of Jeedal Doe. “Buuggani wuxuu ku quustaa inuu kuu abuuro caadooyinkii ugu fiicnaa si aad adduunka ugu guulaysato oo uu u kala jebiyo qaybo dheef -shiid ah. Waxaan aad ugula talinayaa qof walba. ”
Sida Socrates sheegay, nolosha aan la baarin ma aha mid mudan in la noolaado, markaa bilow akhriska oo wax badan ka ogow naftaada iyo sida aad dunida ugu dhex socoto.
Buug Gacan -qabasho leh
Buuggu uma baahna inuu noqdo kun bog oo qoraal ah si uu waxtar iyo waxtar u yeesho. Qaar ka mid ah buugaagta aan ugu jeclahay waa kuwo sahlan oo sahlan in lagu akhriyo fariin cad oo caalami ah.
"Paul Arden"Maaha Sidaad U Wanaagsan tahay, Waa Sida Aad U Wanaagsan Tahay Inaad Noqoto: Buugga Ugu Iibinta Badan Adduunka ” Tusaha jeebka ee ku saabsan sida loo guuleysto waxay bixisaa deg -deg deg ah iyo xikmado xigmad ah oo aad ugu adeegsan karto ganacsiga iyo noloshaada shaqsiyeed, ” ayuu yiri Dr. Zachary Okhah, Aasaasaha iyo Madaxa Qalliinka at PH-1 Miami. “Farshaxanka xiisaha leh, sawir qaadista, iyo garaafyada, waxaa ka buuxa xiiso. Maaha Sidaad U Wanaagsan Tahay wuxuu daboolayaa wax walba laga bilaabo fikradaha nacasnimada ah ee kaa caawinaya inaad ka gudubto caqabadaha maskaxda ilaa shaqada laga eryo waxay noqon kartaa wax wanaagsan. Waa buug ku habboon bogga illaa aad u baahan tahay aragti yar oo dhiirrigelin leh. ”
Sababtoo ah buuggu waa dheer yahay oo dhib badan yahay, had iyo jeer macnaheedu maahan inay weyn tahay! Mararka qaarkood waxaad rabtaa inaad fududayso.
Xikmadda Dhabta Ah
Markaad buugga weyn boggiisa ku aragtid xikmad xigmad leh, weligeedba way kula joogtaa, oo cid kaa qaadi kartaana ma jirto. Waxaa intaa dheer, kolba sida aad u soo ururiso xikmad badan, ayaa si ka sii fiican loo qalabeyn doonaa si aad wax uga qabato caqabadaha ugu adag nolosha.
"In Sida loo guuleysto asxaabta iyo saameynta dadka, mid ka mid ah buugaagta ugu iibinta badan abid, Dale Carnegie ayaa soo jeedisay inaan indhaheena iska qaadno oo aan u muujino xiisaha dadka kale haddii aan rabno in si wanaagsan loo jeclaado, ”ayuu yiri Haim Medine, Aasaasaha iyo Agaasimaha Hal-abuurka at Mark Henry Jewelry. “Taladaani waxay la xiriirtaa oo kaliya xiriirka shaqsiyeed, waxay kaloo ka caawisaa kobcinta xiriirada xirfadeed. 'Haddii aan rumaysanno, waan gaari karnaa' wuxuu ahaa farriin dhiirrigelin leh David J. Schwartz oo lagu soo bandhigay buugiisa saameynta leh, Sixirka Fikirka Weyn. Waxaan ku heli karnaa dhammaan rabitaanka nolosheena si fudud annaga oo abuurnay xaqiijinno xoojinaya aaminsanaantaas. ”
Iyada oo in ka badan darsin talooyin buugaag ah oo ka socda hoggaamiyeyaasha ganacsiga weyn, waxaad haysataa xidhmooyin aad ku shaqeyso. Rakib akhristahaaga elektarooniga ah ama soo qaado xoogaa waraaqo ah-wax kasta oo aad sameyso, marna ha joojin akhriska!